Rakkoo nageenyaa Naannoo Amaaraatti mudate furuuf qamoleen Federaalaa bobba'uufi - BBC News Afaan Oromoo
Image copyright Federal Police
Naannoo Amaaraatti rakkoo nageenyaa gidduugala fi Lixa Goondar akkasumas bulchiinsa Saba Qimaantiitti mudate furuuf humni nageenyaa federaalaa bobba'ee akka tasgabbeessu murtaa'e.
Bulchiinsa Mootummaa Naannoo Amaaraa bakkeewwan tokko tokkotti rakkoon nageenyaa ji'ootaaf ture ''naannicharra darbee biyyaaf sadarkaa yaaddessaarra wan gaheef'' qaamoleen nageenyaa Federaalaa gidduu seenuun akka tasgabbeessan Manni Maree Nageenyaa naannichaa murteessuu ibsa baaseen beeksise.
Naannoolee rakkoon nageenyaa hammaataan isaan mudate akka gidduu galaa fi Lixa Goondar, magaalaa Goondariifi bulchiinsa Saba Qimaantitti Rayyaa ittisa biyyaa dabalatee qaamoleen, nageenyaa mootummaa federalaa bobba'uun yeroo gabaabaa keessatti akka tasgabbiin bu'u qajeelfamni kennameera jedha ibsichi.
Tasgabbii barbaadamu fiduuf ''tarkaanfiin seeraa kamuu'' fudhatamuu akka danda'uus eereera.
Eenyummaa bu'ureffachuun waggoota shanan darbaniif tasgabbii dhabuu naannicha mudateen lubbuun namaa darbuu fi qabeenyi manca'uu manni maree kun ibseera.
Rakkoo naannoo kanaa naannicha gara tasgabbii dhabuu guutuu ta'eetti kan galchu darbees biyyattiif yaaddoo nageenyaa hammaataa gara ta'uutti ce'eera jedha.
Bu'uuruma kanaan Mootummaan Naannichaa, Mootummaa Federaalaatiif waamicha dhiyeessee, qaamoleen nageenyaa Federaalaas itti gaafatama kana akka fudhatan qajeelfamni baheera.
Gaaffii Eenyummaa Qiamaantiif mootummaan naannichaa deebii malu kenneerra kan jedhu ibsichi, ''komiin yoo jiraate karaa naga qabeessa dhiyeessuun osoo danda'amuu irreedhaan fedha ofii guuttachuuf yaaluun faallaa heeraa fi gocha farra nageenyaati'' jedheera.
Adeemsi ''seeraan alaa'' Koree bulchiinsa ofiin bulaa Qimaant qulachuuf tarkaanfiin fudhatamuus miidhaa guddaa geessisaa jira jedha ibsichi.
Keessauma Ji'a Fulbaanaa keessa naannichatti miidhaan qaqqabe gudda ta'u eeruun, miidhaa lubbuu namaa fi qabeenyarra gahaa jiruun dabalataan sochiin hawaasummaa fi diinagdee hedduu laafeera jedhameera.
Nanniichi rakkoo kana furuuf mootummaa Federaalaa waliin mariyatee murteewwan murteesse keessaa muraasni:
Sochii humnaa kamuu tarkaanfii humnaa fudhachuun, sochiin akkasii akka itti hin fufne gochuu
Gareeleen lolatti seenan naannicha tasgabbeessuuf jecha atattamaan gara mariitti akka dhufan waamichi dhiyaateera.
Shakkamtoota dabarsanii kennuun namni dhuunfaa kamuu sochii qaamoleen nageenyaa nagaa buusuf taasisan dirqama deeggaruu itti kenname bahuu.
Hidhannoo qaamolee nageenyaa beekaman harka jiruun alatti, naannolee kanatti hidhannoo qabatanii socho'uun yeroo hin murtoofneef kan dhorkamu ta'ee, yoo argame kan dhaalamu ta'uu.
Ibsichi qabxiilee muraasa armaan olitti kaahaman dabalatee qabxiilee 11 baasuun nageenya naannichaa mirkaneessuuf kan hojjetu akka ta'e beeksiseera.